LA AQBALO KALA SOOCIDDA SNAPDRAGON ADIGOO DHERER DHIR LEH - WARSHAD ORNAMENTAL KORAYA
Qaybaha libaaxa libaax ee dhererka duurka
Antiraterum, ama snapdragon - warshad qurux badan oo aan caadi ahayn, oo magaceedu ka yimid Giriigga "anti" iyo "wiyisha" - "sida sanka." Snapdragon waxaa loola jeedaa dhirta qashinka ee sanadlaha ah. Waxay leedahay jeexjeex ah afkoda kaas oo ka samaysan duurka budada ah.
Dhererka wuxuu ku xiran yahay nooca iyo kala duwanaanta 25 ilaa 90 cm iyo wixii ka sareeya. Ubaxyo badan oo labajibbaaran ayaa lagu ururiyaa suxuunta la isku qurxiyo, midab kala duwan - midab, jaalle ah ilaa casaan, casaan mugdi ah iyo buluug, oo ku xiran noocyada kala duwan.
Midhaha antirrhinum waa sanduuq laba-caan ah oo labajibbaaran. Duufaannada libaaxyada dhirbaaxada xayawaanka leh ee qaabka nuugan, sidaas darteed waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah ubaxyada sanadlaha ah ee ugu quruxda badan. In England, snapdragon ayaa leh magaca ugu xiisaha badan - masduulaagii qaniinay; Faransiiska waa Afka Afka. Dadka reer Ukrain waxay si tartiib ah u sameeyeen dibnaha ama afka. Magacyada kale ee caanka ah sidoo kale waa caan - afka masduulka, ubaxa, eeyo, wejiyada libaax.
Ma taqaanaa? Halyeeyga asalka ee snapdragon ubaxa waa mid aad u xiiso leh. In kaynta Nemeisky ee Giriigga hore, waxaa ku noolaa hal dabeecad xun - libaax aad u weyn, oo maalin kasta weeraray dadka oo ay cuneen. Dad badan oo dagaalyahanno ah ayaa isku dayay inay dilaan, laakiin maylalkooda, ama fallaagidooda, ama seefta fiiqan waxay dhaawici kartaa maqaarka libaaxa, wayna dhaawici karaan. Illaaha ilaaheeyaha ah ee Hera ayaa go'aansaday in uu u naxariisto dadka mooraalka ah ayna u direen si ay u caawiyaan Hercules. Dagaalkii ayaa daba socdey oo dilay xayawaankii ugu xumaa, isaga oo dhibaateeyay. Tani waxay ahayd fanaankii koowaad ee Hercules. Flora, ilaahyadii ubaxyada, waxay ka heleen guushaan waxayna abuurtay ubax cusub oo sharaf leh Hercules, taas oo u egtahay afka libaax furan, oo ay ugu yeedhay "snapdragon." Tan iyo markaas, ubax ayaa si caadi ah loo siiyay guulaystayaasha iyo geesiyaal.
Xulashada antiraatiirta ugu horreysa ee ku hawlan samaynta qarnigii XIX ee Jarmalka. Tan iyo markaas, saynisyahannadu waxay soo saareen in ka badan 1000 nooc oo dhirtaas, noocyada kala duwan ee noocyada iyo midabyada kuwaas oo laga hadli karo si aan dhammaad lahayn. Wixii beerta kasta oo xirfadle ah oo hiwaayadda ah, waxaa jira fursad ay ku doortaan muuqaalka snapdragon midabkaaga oo dhadhankiisa: laga bilaabo noocyada hooseeya ee soo kordhaya ilaa ubaxyo waaweyn oo gaaban.
In floriculture xirfad leh, waxaa jira dhowr kala duwan ee snapdragon. Midda ugu fudud waa dhererka dhirta, oo ka kooban 5 kooxood: gigantic, dheer, badhkiis (dherer dhererka), hooseeya iyo cirifka. Marka laga soo tago kala soocidda, waxaa sidoo kale jira baahida guud ee Sanderson iyo Martin, oo loo isticmaalo noocyo loogu talagalay goynta wareegga sanadka. Si kastaba ha noqotee, noocyadani waxay ku haboon tahay kuwa kori kara snapdragon, ee ma ahan raaxo madadaalo, laakiin ujeedo ganacsi.
Ma taqaanaa? Antiritarum wuxuu leeyahay hanti daweyn ah. Marka cudurada beerka iyo mindhicirrada caloosha ay cabbaan shaaha laga bilaabo snapdragon. Tincture ee ubaxa waxay qaadaan xanuunka madax-xanuun, neefta gaaban, dhibicda. Warshadda dibadda waxay ka caawisaa inay la dagaallanto cagaarshowga, boogaha, boogaha, codadka kala duwan, iyo cudurrada indhaha.
Cambaarta (15-20 cm)
Noocyada dhirta cirifka ah ee libaaxa waxay gaartaa dhererkoodu 15-20 cm. Kuwani waxay ku haboon yihiin koritaanka dheryihii, iyo sidoo kale xuduudaha qurxinta, sariiraha ubaxa, sariiraha alpine. Dhirta Bushes leh caleemaha badan, branching xoog leh. Caleemaha ugu muhiimsan ee noocyada noocan ah waa badanaa ka hooseeya caleemaha amarka labaad, ama waa la nadiifiyaa iyaga. Inflorescences waa gaaban, aan ka badnayn 8-10 cm, ubax yaryar. Noocyada ugu caansan ee snapdragon: "Tom Tumb", "Floral", "The Hobbit."
Snapdragon "Tom Tumb" - Tani waa warshad bushan oo isku dhafan, oo gaadho dherer ilaa 20 cm, qaab muuqaal ah. Waxay leedahay caleemo dhuuban iyo caleemo waaweyn. Caleenta cufan, gaaban, ubaxyada inflorescences yar. Ubaxku waa dhalaal dhalaalaya, oo leh madoollo madow ah. Tani waa kala duwanaansho hore kaas oo ka soo jeeda bartamihii Juun iyo Blooms ilaa Sebtembar.
"Floral" ("Floral") - Iskuday noocyo kala duwan oo xiiso leh antiritar-ka-dillaac. Waxay leedahay qaab shisheeye oo isku dhafan, waxay ku kala duwan yahiin, ubax isku mid ah iyo midabyo kala duwan. Kala duwan ayaa ku saabsan 13 kala duwan oo midabyo, labadaba iyo laba midab. Ubaxyo qurux badan" Noocyada Flora waxaa la beeray si ay u abuuraan qaababka midab kala duwan ee goobta, iyo sidoo kale koray dheriyo.
Kooxda "varietal" Hobbit (Hobbit) sidoo kale wuxuu leeyahay midabyo kala duwan. Noocyada noocan oo kale ah waxay u muuqdaan kuwo ku wanaagsan ubaxyada, iyo sidoo kale ku habboon beeritaanka weelasha, waxay kuu oggolaanayaan inaad diirada saarto habka ubaxa midabka leh iyo midabka midabka leh. Ubax noocyo ah "Hobbit" wuxuu yeelan karaa midab kasta: laga bilaabo cad, jaalle iyo casaan ilaa casaan, maroon iyo guduud.
Low (25-40 cm)
Anti-rinum ee kooxdan waxay gaartaa dherer 25 illaa 40 cm waxaana lagu koray ubax sariirta ubax ama ubaxyada ubaxyada. Waxay leeyihiin caleemo ubax badan oo ah dariiqa II iyo III, laakiin caleemaha ugu muhiimsani waa heer isku mid ah ama ka hooseeya caleemaha amarka. Tirada ubax ee ubucsanaanta waa ka yar tahay kuwa noocyada sare iyo dhexdhexaad ah. Florescences ee noocyada hoose waa "dabacsan", ka yar yar oo ubaxyo ka badan noocyo koobi. Sidoo kale, noocyada hooseeyo waxay ku kala duwan yihiin muddooyinka ubaxyada hore iyo kuwa dhexe. Tusaalooyinka noocyada:
"Crimson Velvet" - Warshad baadiyaha ah ilaa 35 cm oo sarre leh, dad badan oo aan dhicin. Caleemaha waa cagaar madow oo leh cagaar cas, caleemaha sidoo kale waa cagaar madow, ballaaran. Waxay leedahay inflorescences ballaaran oo badan oo ubax ah ee cufnaanta dhexdhexaadka ah. Ubax waa dhexdhexaad, lafdhabar, casaan mugdi ah. Tani waa noocyada ugu dambeeyay ee noocyada ugu hooseeya, waxay kala-baxaan badhtamaha July illaa inta ku dhow dahay.
Schneeflocke - warshad baadiyaha ah oo isdabajooga, oo gaadhaya 25-35 cm. Gustovetvistoe, qaabdhaqan leh, caleemo dhuuban iyo caleemo badan. Caleemuhu waa kuwo yaryar, cagaaran, waxay leeyihiin foomka lanceolate iyo foormaato dheer. Inflorescences yar-ubax leh ubax yar yar cad. Kala duwan xilliga hore, ubaxyada billowga horraantii Juun iyo ubaxyada ilaa bisha Oktoobar. Seeds "Schneeflokke" ayaa liqay.
Kooxaha kala duwan "Crown" ("Crown") - Dhirta caleemaha waxay gaartaa 35 cm. Ubaxa wuxuu u muuqdaa mid aad u fiican ubaxyada, weelasha, iyo sidoo kale in lagu xiro dambiilo ubax ah. Wixii beerta ubaxyada qurxinta ee sariiraha ubaxa, tilmaame ah ee muddada dhirta horumarinta dhirta laga bilaabo abuurka abuurka ah ee fariinta ubaxyada for geedo si ubax waa mid aad u muhiim ah. Noocyo "Crown" waxay leeyihiin muddada gaaban ee horumarinta. Maalinta aadka loo jecel yahay waa noocyada kala duwan ee loo yaqaan "light light mauve", oo ka muuqda suuqa 1999. Kala duwan ayaa leh lilac nuxur leh, oo u rogaya ubaxyo guduud ah.
Ma taqaanaa? Jarmal Dhexe Dhexe, takhasuska dabiiciga ah waxaa loo tixgeliyey habka ugu wanaagsan ee looga hortago sixirka, sidaa darteed dadku waxay diyaargaroobeen ubaxyo la qalajiyey oo ku duubay qoortooda iyagoo ah taliyaal. In Bariga, decoction ee warshadda waxaa lagu qaso saliidda saliid oo loo isticmaalo sida qurxiyo. Waxaa la rumaysan yahay in aad u baahan tahay in aad saliid wejiga ku dartid wejiga kareemka si aad ugu farxiso qof walba.
Qeyb sare (40-60 cm)
Dhiig-sare ama dhexdhexaadin dhexdhexaad ah ayaa gaaraya 40-60 cm oo dherer ah. Waxay ku kala duwan yihiin xaqiiqda ah in caleemaha dhexe ay wax yar ka sareeyaan caleemaha dhinaca, iyo sidoo kale branch branch adag. Tirada ubaxa ee inflorescence waxoogaa yar ka yar noocyada sare. Kooxdani waxay leedahay noocyo kala duwan waqtiyo ubax kala duwan. Qaybaha dheeraadka ah waa kuwa kala duwan ee snapdragon, iyaga oo koray qaabka qurxinta ubaxa iyo jarista. Tusaalooyinka noocyada:
"Rose Rose" ("Wildrose") - Warshadku waa ilaa 40 cm oo sarre, waxay leedahay inflorescences dabacsan oo gaaraayo dherer 20 cm.Dhulku waa weyn yahay, midab qurux leh oo casaan leh. Kala duwan ayaa leh waqti caadi ah ubax.
"Boqortooyada Dahabka" - Goob dhoobo ah oo dhoobo, 50-55 cm dherer. Waxay leedahay caleemo xoog leh iyo caleemo cagaaran oo waaweyn. Inflorescences cufan, badan-ubax, ubax yihiin waaweyn, kareysa, liin iyo jaalle. Tani waa noocyo kala duwan oo dabiici ah, kaas oo ka billowda bisha Luuly ilaa laga gaaro baraf.
"Dabeecadda" - warshad baadiyaha iswada leh, waxay leedahay qaabka haramka ciriiriga ah ama tiirbigana wuxuu gaaraa dherer ah 45-55 cm Caleemaha waa xoog xoog leh, wax yar wax yar, caleemaha waa ballaaran, lanceolate, cagaaran oo leh baqshad naxaas ah. Inflorescences, dhif ah, yar-ubax, oo aan midab lahayn. Ubaxa waa kuwo waaweyn, jaalaha ah-casaan ama casaan-casaan leh sublak lilac. Tani waa kala duwanaan hore ee snapdragon, kaas oo ka billaabanaya Juun ilaa ilaa inta kuugu dhow.
"Liebesglut" - warshad baadho ah, oo ah 50-60 cm, oo leh caleemo xoog leh iyo caleemo cagaaran oo cagaaran. Inflorescences badan oo ubaxyo, ubax of size dhexdhexaad ah, casaan mugdi, color cherry. Tani waa kala duwanaansho hore kaas oo ka yimaada bartamihii June iyo ku dhawaad ​​dhaxan. Seeds waxaa lagu kala saaraa by Bisaylkiisa wanaagsan.
"Madaxa Madaxa Bannaan" ("Red Chief") - warshad baadiyaha ah oo ku saabsan qiyaas ahaan 45-55 cm oo sare, caleen cufan. Caleemaha waa cagaar madow, xoog leh, caleemaha waa ballaaran, ballaaran-lanceolate. Duufaannada cufnaanta dhexdhexaadka ah, ubaxa waa kuwo waaweyn, lafdhabar, casaan mugdi ah, ha qalloocin qorraxda. Waa noocyo kala duwan oo ubax dhexdhexaad ah, ubaxyada dhammaadka Juun.
Heer sare (60-90 cm)
Afka libaax ee dhererkiisu kor buu u kordhay marka la jarayo ama sida xoojinta xoogga ah ee kooxo qurxoon. Geedka dhererkoodu wuxuu gaaraa 60 ilaa 90 cm, caleemahooda dhinaca yar ayaa ka hooseeya midda dhexe. Isku day inaad u jilciso duurka. Inflorescences badan-ubax iyo aad u ballaaran. Noocyada Tallaalka waa todobaad ama wax ka badan oo la gooyey. Kaarbooyinka ugu caansan - noocyo of hooska huruud ah. Tusaalooyinka noocyada:
"Brilliantrosa" (Brilliantrosa) - Warshad baadiyaha ah oo ah qaabka "Pyramidal" ah, 70-80 cm oo sarre leh, xididdadu waxay toosan yihiin, xooggan, caleemaha waaweyn, cagaaran, lance-qaabeeya. Ubadka waa ballaaran, cufnaanta dhexdhexaadka ah, ubaxyadu waa kuwo waaweyn, midab badan, midab casaan leh. Tani waa kala duwanaansho hore oo ubaxyada laga soo bilaabo bartamihii Juun iyo blooms ilaa dhaxan. Seeds si fiican u bislaadaan.
afka libaaxa "Alaska" ("Alaska") - Warshadani waxay gaartaa dhererka 60 cm, waxayna leedahay laan dareen oo daciif ah. Ubaxku waa caddaan, inflorescences waxay gaartaa dhererka 25 cm Tani waa kala duwanaansho udub dhexaad u ah qaabka ubaxa.
"Velvet Giant" - Warshad baadiyaha ah oo ah qaabka "Pyramidal" ah, 70-85 cm oo sarre leh, xididdadu waa kuwo toosan, xooggan, caleemo waaweyn, cagaar mug leh leh hooska burgundy, qaabka lanceolate. Duufaannada cufnaanta dhexdhexaadka ah. Ubaxa waa weyn, mugdi madow-casaan, aad u karisey. Tani waa kala duwanaansho hore oo ubaxyada laga soo bilaabo bartamihii Juun iyo blooms ilaa dhaxan. Seeds si fiican u bislaadaan.
snapdragon "Vulcan" ("Vulcan") - Warshad baadiyaha ah ee qaabka "Pyramidal" ah oo aan ka badnayn 75 cm. Ubax waa weyn, aad u caraf badan, laga bilaabo iftiin jaalaha ah ilaa mugdi madow, ocher. Duufaannada cufnaanta dhexdhexaadka ah. Tani waa kala duwanaansho hore oo ubaxyada laga soo bilaabo bartamihii Juun iyo blooms ilaa dhaxan.
"Talo-sare" ("Talo-sare") - Ubaxyada kala duwan ee noocaan ah badiyaa casaan leh oo leh jajab aan caadi ahayn oo jaale ah. Si kastaba ha noqotee, kooxdani waxaa kale oo lagu gartaa noocyo kala duwan oo ah noocyada kala duwan ee inflorescences. Caleemaha dhirta waxay gaartaa dhererka 80 cm. Koritaanka noocyada kala duwan ee snapdragon waa suurtogal in la gooyo oo lagu qurxiyo sariiraha ubaxa iyo xuduudaha.
Giant (90 iyo kor)
Noocyada ugu sarreeya ee snapdragon, gaaraya dhererka 90 illaa 130 cm Caleemaha dhexe ee noocyada noocan oo kale ah ayaa aad uga sareeya caleemaha of II amar, halka caleemaha of amar III ay maqan yihiin. Ubaxyada waaweyn ee waaweyn ayaa koray si ay u jaraan. Noocyada caanka ah:
"Rose" ("Rose") - Kala duwanaansho qurux badan oo antirrhinum ah. Waxa lagu gartaa ubax jilicsan oo jilicsan, oo ah qaab quruxsan, kaas oo si fiican u dhigma dhirta kale. Kala duwanaanshahan waxaa lagula talinayaa in lagu sameeyo farshaxanka ubaxa gaarka ah ee ubaxa. Caleemaha dhirta waxay gaaraan dherer ah 100 cm, mararka qaar wax yar ka hooseeya.
noocyo taxane ah "Rocket" ("Rocket"), kuwa ugu caansan dhererka dheer, oo bixiya fasal koowaad. Kala duwanaan "Rocket" wuxuu leeyahay kala duwanaansho kala duwan, oo lagu magacaabo daboolka duufaanka. "Liifka Rocket" - midabka aan caadiga ahayn ee ubaxa ee snapdragon, cad oo leh jilicsan oo cagaaran-jaale ah. Sidoo kale midabada caadiga ah ee noocyada kala duwan ee "Rocket golden" ("Golden Rocket") - jaalle; "Burcad-boobka" - salmon-casaan leh jilicsanaan jilicsan oo jilicsan oo caleemo jilicsan, iyo "Cherry" ("Cherry") - casaan-casaan. Muuqaal kale oo xiiso leh ee Rocket Orchid ee snapdragon ee weyn waxaa lagu gartaa lavender aan caadi ahayn iyo midab buluug ah. Maqsinnada noocyada kala duwan waxay gaaraan dherer ahaan 1 m.
Sidoo kale noocyo caan ah oo loo yaqaan "Arthur" - illaa 95 cm oo dheer oo leh ubaxyo cherry-color iyo "F1 guduud XL", "F1 casaan XL" - siday u kala horreeyaan, midabka casaan iyo guduud, kaas oo gaara caleemaha ilaa 110 cm ee height.
Waa muhiim! Marka ay kor u kacdo daawooyinka dabiiciga ah waxaa haboon in la xusuusto in tani ay tahay geedka jilicsan ee xayawaanka.
Sidee u koraan geedo ka mid ah basbaaska baayacmushka ah ee berriga ah ee guriga laga soo saaro?
Sida loo abuuro oo u koraan qajaarka kala duwan "Far Eastern 27"
Qeybinta Daffodil: sida loo doorto warshad sariirta ubaxaaga
Yarrow: beerashada, dhalmo, isticmaalida naqshad beerta, guryaha dawooyinka ah
Chiktonik waa kakan oo leh fitamiino iyo asiidh amino ah oo ka kooban halabuurka waxaana loogu talagalay in lagu kobciyo lana dheellitiro cuntada iyo xoolaha beeraha iyo shimbiraha. Cabbiraadda 1 ml Chiktonika wuxuu ka kooban yahay fitamiino: A - 2500 IU, B1 - 0.035 g, B2 - 0.04 g, B6 - 0.02 g, B12 - 0.00001, D3 - 500 IU; arginine - 0.00049 g, methionine - 0.05, lysine - 0.025, cholesterol chloride - 0.00004 g, sodium pantothenate - 0.15 g, alfatocoferol - 0.0375 g, threonin - 0.0005 g, serine - 0,00068 g, glutamic acid - 0,0116, naadi - 0.00051 g, glycine - 0.000575 g, alanine - 0.000975 g, cystine - 0.00015 g, valine - 0.011 g, leucine - 0.015 g, isoleucine - 0.000125 g, tyrosine - 0.00034 g, phenylalanine - 0.00081 g, tryptophan - 0.000075 g, - 0.000002 g, inositol - 0.0000025 g, histidine - 0.0009 g, aspartic acid - 0,0145 g. Read More
Dib-u-eegidda qandhada ee ukunta "AI-192"
Go'aaminta muddada geedka ee bakaylaha